Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Category | Political Parties – နိုင်ငံရေးပါတီများ
Category Archives: Political Parties – နိုင်ငံရေးပါတီများ
Posted on July 24, 2017 by freeburma
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ထုမေ ပါတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်
via သစ်ထူးလွင် Myanmar News Now http://ift.tt/2eIxB2l http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted in Political Parties - နိုင်ငံရေးပါတီများ	| Tagged Feedly, IFTTT	| Leaveacomment |
Posted on May 9, 2017 by freeburma
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးနှင့် ဦးဝင်းထိန်တို့ကို အရေးယူရန် ၁၃ ပါတီတောင်းဆို
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလက နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးတင်ဦးနဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်တို့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ ဥပဒေဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ရာရောက်တဲ့အတွက် အရေးယူပေးဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၃ ပါတီက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၃ ပါတီက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌထံ မေလ ၈ ရက်စွဲနဲ့ တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အစိုးရသက်တမ်း တနှစ်ပြည့်အဖြစ် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ ရေဒီယို အစီအစဉ်တွေကနေ မတ်လ ၃၀ရက်က မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ အချိန်ကိုက်ပြီး အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေပါဝင်တဲ့ စည်းရုံးဟောပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းဖြစ်ကြောင်း အထင်အရှားတွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒ့ါအပြင် ဒီမိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံကို ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်တာတွေ မပြုလုပ်ရလို့ တားမြစ်ထားတဲ့နေ့မှာ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေ ဖော်ပြခဲ့တာဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် က တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အမိန့်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာ ရောက်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အလားတူ အန်အယ်လ်ဒီ နာယက ဦးတင်ဦးနဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်တို့ဟာ မတ်လ ၃၀ ရက်ညက မြန်မာ့အသံနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အမျုိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အလံ၊ ရင်ထိုးတံဆိပ်တွေ တပ်ဆင်ကာ မူဝါဒအခက်အခဲတွေကို ချပြပြီး ပါတီအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးနဲ့ ဦးဝင်းထိန်တို့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ အမိန့်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကို ကျူးလွန်ချိုးဖောက်တဲ့အတွက် ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူပေးဖို့ ၁၃ ပါတီက ခေါင်းဆောင်တွေ လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းရာမှာ ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းညွန့်ကတော့ မနေ့က ပါတီတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီးလက်မှတ်ထိုး ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဥပဒေအအထက် မည်သူမှ မရှိစေဖို့ အခုလို ကန့်ကွက်တာလို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနေ်ာတို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ပို့လိုက်ပြီလေ။ ကျနေ်ာတို့ဘက်ကတော့ ဒီဥပဒေရဲ့အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိရဘူးဆိုတဲ့မူနဲ့ ဒါကတော့ အခြေခံဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူတဲ့လူတွေဟာ ပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ရဘူး။ အဲဒီလိုပဲ မဲမဆွယ်ရဘူးဆိုတဲ့နေ့မှာ မဲဆွယ်နိုင်ဖို့ မြန်မာ့အလင်းတို့ ကြေးမုံတို့ MRTV တို့မှာ အသံလွင့်တာတွေ၊ သတင်းစာတွေထဲမှာ ရေးသားတာတွေဟာ ဒါ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကျင့်ဝတ်မှာလည်း အစိုးရပိုင်ပစ္စည်းကို မသုံးရဘူး။ အဲဒီအချက်တွေကိုလည်း ကော်မရှင်ကိုတင်ပြတာပဲ။ ကော်မရှင်က ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ ကော်မရှင်အပိုင်းလေ။ ကျနော်တို့ကတော့ ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ ကော်မရှင်ကိုတင်ပြဖို့ တာဝန်ရှိတဲ့အတွက် ကော်မရှင်က ဒီပေါ်ဘာလုပ်မလဲ ကော်မရှင်မှာတ၀န်ယူတဲ့ လူတွေရဲ့ အပိုင်းပဲပေါ့။”
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဟာ လက်ရှိ အသက်ဝင်နေတဲ့ ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက် လိုက်နာဖို့ လိုတယ်လို့လည်း ဦးသိန်းညွန့်ကပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ကတော့ တချက်ပဲ၊ ဒီ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်။ ယနေ့အသက်ဝင်နေတဲ့ ဥပဒေဖြစ်တယ်။ ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ရင် မပြင်နိုင်သေးခင်မှာ ဒီအခြေခံဥပဒေအရ ကတိသစ္စာပြုပြီးတော့ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်လာတဲ့လူတွေ အစိုးရအဖွဲ့မှာ တာဝန်ယူတဲ့လူတွေဟာ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ လောလောဆယ်ကတော့ ဒီအခြေခံဥပဒေရဲ့ ထိန်းကျောင်းမှုကို ခံယူရမှာပဲ။ သမ္မတအထက်မှာ တက်နေတာကတော့ မိမိရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စ။ အခြေခံဥပဒေကို လိုက်နာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပါမယ်လို့ ပြောပြီးတော့ အခြေခံဥပဒေပါပြဌာန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ၀န်ကြီးတာဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာ ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေ မဆောင်ရွက်ရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်တော့ ချိုးဖောက်ကြောင်း ထောက်ပြရမှာက နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ တာဝန်ပဲလေ။”
ခုလို အရေးယူဖို့ ပူးပေါင်းကန့်ကွက်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၃ ပါတီထဲမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်၊ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသား အင်အားစုပါတီ စတဲ့ပါတီတွေပါဝင်ပါတယ်။
The post ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးနှင့် ဦးဝင်းထိန်တို့ကို အရေးယူရန် ၁၃ ပါတီတောင်းဆို appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/2qWG9Ui http://burmese.dvb.no
Posted on May 4, 2017 by freeburma
ကောလာဟလ ဖန်တီးသူတွေကို အရေးယူမည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် နှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း၊ သူရဦးရွှေမန်းကို သမ္မတအဖြစ်ခန့်ဖို့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံခြားခရီးစဉ် ပြန်အလာကို စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဖြန့်ချိသူတွေကို အရေးယူပေးဖို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကို တိုင်ကြားထားတယ်လို့ NLD ပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းထိန် က ပြောပါတယ်။
အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး တရားစွဲဆိုမှုကို ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်း ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။
အခုလိုသတင်းတွေ ထွက်ပေါ်တာဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံခြား ခရီးစဉ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပြီး အခုဖြစ်ပေါ်နေတာဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် အခုလိုအရေးယူဖို့ လုပ်ဆောင်တာလို့လည်း ပြောပါတယ်။
အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကို အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် အစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးမယ်လို့ ဦးဝင်းထိန် က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်ကလည်း ဦးဝင်းထိန် ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ပါတီကနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီ ပါတီတံဆိပ်တုံးနဲ့ လူမှုကွန်ရက်တင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး ပဲခူးက ဦးဖိုးထောင် ဆိုသူကို တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ် ၆ လ ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2pahlqM http://www.rfa.org
မကွေးတိုင်းအစိုးရကို ပြန်လည်ပေးသွင်းဖို့ ကတိပြုထားတဲ့ ငွေတွေထဲက ကျပ်သိန်းပေါင်း ၃ ထောင်ကို ဒီကနေ့နေ့ လည် ၁ နာရီမှာ ရွှေသုခ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းက မကွေးတိုင်းအစိုးရ ဘဏ်ငွေ စာရင်းကို လွှဲအပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ တိုင်းလူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးနေမျိုးကျော်က အခုလို ပြောပါတယ်။
အရင် မကွေးတိုင်းအစိုးရ လက်ထက်က ရေနံလက်ယက်တွင်း လုပ်ငန်းတွေကနေ ကောက်ခံထားတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေ ထဲက အစိုးရသစ်ကို လွဲပြောင်းမပေးဘဲ ငွေချေးလုပ်ငန်းမှာ အသုံးပြုထားတယ်လို့ စစ်ဆေး ပေါ်ပေါက်ချက်အရ ဒီငွေတွေကို တိုင်းအစိုးရသစ်လက်ထဲ ပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့က အကြောင်း ကြားထားတာပါ။ ရွှေသုခ ချေးငွေလုပ်ငန်းနဲ့ အရင် တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးဘုန်းမော်ရွှေတို့ဟာ ယာဉ်စက် ယန္တယားတွေကို ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ တိုင်းအစိုးရသစ်ကို လွှဲအပ်ခဲ့ပြီး၊ ငွေတွေကိုတော့ မေလ ပထမအပတ်ထဲမှာ သိန်းပေါင်း ၅ ထောင် လွှဲအပ်မယ်လို့ ကတိပြုခဲ့တာပါ။
ဒီကနေ့ သိန်းပေါင်း ၃ ထောင် စတင်လွှဲပေးခဲ့ပြီး၊ မနက်ဖြန် မေလ ၅ ရက်နေ့မှာ နောက်ထပ် သိန်းပေါင်း ၅ ထောင် လွှဲအပ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2pdjl27 http://www.rfa.org
Posted on November 7, 2016 by freeburma
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2eDMnVP http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Political Parties - နိုင်ငံရေးပါတီများ	| Tagged Feedly, IFTTT, NLD, Political Parties, RIghts	| Leaveacomment |
Posted on October 30, 2016 by freeburma
ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးသည် လက်တွေ့မှာ “ကိုယ့်ယို့ကားယားတွေချည်းပဲ” ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဥက္ကဌ ဝေဖန်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးသန်းဌေး(ဓာတ်ပုံ- မင်းမင်း/မဇ္ဈိမ)
အောက်တိုဘာ ၃၀ရက်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်။ ။ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဟူသည့် အသုံးအနှုန်းများသည် လက်တွေ့မကျဘဲ လူ့အခွင့်အရေးကို အကြောင်းပြပြီး အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာကို ထိခိုက်နိုင်သည်ဟု ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးသန်းဌေးက ဝေဖန်လိုက်သည်။
"ဒီနေ့ လူကြိုက်များတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတို့၊ ဒီမိုကရေစီအရေးတို့၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့ ကြားလို့ သိပ်ကောင်းတယ်။ လက်တွေ့မှာ အားလုံး ကိုယ့်ယို့ကားယားတွေ ချည်းပဲ" ဟု အောက်တိုဘာ ၂၉ရက်၊ မွန်းလွဲပိုင်းက ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်ခရိုင်ပါတီရုံးတွင် ခရိုင်၊ မြို့နယ်အလိုက် ဥက္ကဌများ၊ ကော်မတီဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ဦးသန်းဌေးက ထိုသို့ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်တွေ့မှာ ကိုယ့်ယို့ကားယားတွေချည်းပဲဟု ဦးသန်းဌေးက ဝေဖန်လိုက်သည့် ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးတို့ကို ယုံကြည်သူ အများစုသည် စစ်အစိုးရလက်ထက်အတွင်း ဖမ်းဆီး၊ ထောင်ချ၊ နှိပ်စက်မှုများကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ကြရသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်သည်ဟုလည်း ဦးသန်းဌေးက တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
"လူမျိုးပျောက်သွားမယ့် ကိစ္စမျိုးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရှေ့က ရပ်တည်ရမယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ၊ ကျွန်တော်တို့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ မပျောက်ရဘူး။ ဒါ ဒီပါတီက ခံယူထားတာ၊ အဲ့ဒီကိစ္စရှိလာရင် ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆုံးကနေ ကာကွယ်မယ်။ နောက် တိုင်းပြည်ရဲ့ လုံခြုံရေး ထိပါးလာပြီလား၊ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆုံးက ကာကွယ်မယ်။ နောက် မိမိဒေသတွင်းမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် တွေ့ကြုံလာပြီလား။ ကျွန်တော်တို့အမိန့် မစောင့်နဲ့၊ လုပ်ကြရမယ်။ အဲ့ဒီ သုံးချက်နဲ့ပတ်သက်ရင် ခင်ဗျားတို့ လုပ်ချင်ရာလုပ်၊ အကုန်မှန်တယ်။ အကုန် တရားတယ်။ ဘာအမိန့်မှ မလိုဘူး" ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ပြည်သူလူထု၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် လုံခြုံရေးသည် ဒုတိယဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စ ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဦးသန်းဌေးက အောက်ပါအတိုင်းပြောသည်။
"လူ့အခွင့်အရေးထက် ပြည်သူလူထုရဲ့ စားဝတ်နေရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါ ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ ဒုတိယဦးစားပေး လုပ်သွားမယ့်ကိစ္စ" ဟု ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဩဂုတ်လအတွင်းက နေပြည်တော်ရှိ ပါတီဌာနချုပ်တွင်ပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ် ပါတီညီလာခံတွင် ဦးသန်းဌေးက ပါတီဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အရေးမလှခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် လာမည့် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ရက်တွင် ကျင်းပရန်ရှိနေသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးတွင် ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဟု ပြောဆိုထားသည်။
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/2f6c6nj http://ift.tt/1nfHMox
Posted in Political Parties - နိုင်ငံရေးပါတီများ	| Tagged Feedly, IFTTT, Political Parties	| Leaveacomment |
Posted on October 25, 2016 by freeburma
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2f4MAna http://www.rfa.org
Posted in Political Parties - နိုင်ငံရေးပါတီများ	| Tagged Feedly, IFTTT, NLD, Political Parties	| Leaveacomment |
ရှမ်းပြည် NLD ခေါင်းဆောင်များ ထုတ်ပယ်ခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်တိုဘာ ၂၄ နှင့် ၂၅ တွင် ဦးဝင်းထိန်ကို စစ်ဆေးမည်
ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးနဲ့ တောင်ကြီးခရိုင်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦး
via The Ladies http://ift.tt/2dqvSIK http://ift.tt/1t35IDK
ကွငွောခကျြအတု ထုတျပွနျခဲ့သူကို ရဲက ဖမျးဆီး
NLD ပါတီ တံဆိပျတုံး သုံးပွီး ကွငွောခကျြအတု ထုတျပွနျခဲ့သူကို ရဲက ဖမျးဆီးလိုကျ
via BBCBurmese.com | ပငျမစာမကျြနှာ http://ift.tt/2dTesL4 http://ift.tt/2aCIDV8
Posted on October 10, 2016 by freeburma
ALD ပါတီဝင်ဟောင်းတွေ ပါတီအသစ် တည်ထောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP အဖြစ် ပေါင်းစည်းရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD ပါတီဝင်ဟောင်းတွေက ANP ကနေခွဲထွက်ပြီး သီးခြားပါတီသစ်တစ်ခု တည်ထောင်ရပ်တည်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်ကနေ ၉ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေး မှာအပြီး မနေ့က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရခိုင်ပါတီနှစ်ခု မရှိစေရဆိုတဲ့ ရခိုင်ပြည်သူလူထုရဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP နဲ့ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD ပါတီ နှစ်ခုကို ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP အဖြစ် ပေါင်းစည်း ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်တော်မြို့မှာ နှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို ALD ပါတီထောက်ခံသူတွေနဲ့ ဒေသခံ ၂၀၀ လောက် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2dfGAFi http://www.rfa.org
Posted in Political Parties - နိုင်ငံရေးပါတီများ	| Tagged Ethnics, Feedly, IFTTT, Political Parties	| Leaveacomment |
တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုး ကိုဆောင်ရွက်ဖို့ NLD ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်က ဒီနေ့ ပဲခူးတိုင်းက NLD ပါတီဝင်တွေ၊ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ပဲခူးမြို့၊ ရွှေသာလျောင်းဗိမာန်မှာ ကျင်းပတဲ့ ပဲခူးတိုင်း ၂၈ မြို့နယ်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီဝင်တွေ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဦးဝင်းထိန်က တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တွေ ပါတီနဲ့ ကင်းကွာနေတဲ့အကြောင်း ပြော ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးချိုက ပြောပါတယ်။
"ဦးဝင်းထိန်အနေနဲ့ ပြောသွားတာကတော့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တွေဟာ ပါတီရဲ့မူဝါဒအတိုင်း ပါတီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ဖို့ပေါ့။ ပါတီနဲ့နည်းနည်းကင်းကွာနေတဲ့ သဘောမျိုးလေးတွေ ရှိတယ်တဲ့။ အဲ့ဒါလေးတွေကို ပြင်ဆင်ကြဖို့ ဒီပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရကို ပြောတယ်။ ပါတီနဲ့ ကင်းကွာထဲ က ပြည်သူနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ သဘောမျိုး အဲဒီတော့ပါတီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ဖို့ပေါ့"
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တိုင်းလုံးကျွတ်ပါတီဝင်တွေ တွေ့ဆုံပွဲကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်က ပထမအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့ကျင်းပတာဟာ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပါတီနာယက သူရဦးတင်ဦးက ပါတီဝင်တွေ စည်းကမ်းရှိကြဖို့နဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို လိုက်နာကြဖို့ မှာကြားတယ်လို့ ဦးအေးချိုက ပြောပါတယ်။
တွေ့ဆုံပွဲကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းနဲ့ တိုင်းဝန်ကြီးတွေနဲ့ ပဲခူးတိုင်း ၂၈ မြို့နယ်က အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်တွေ ၄ဝဝ လောက် တက်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2d2ZBar http://www.rfa.org
Posted on September 13, 2016 by freeburma
ANP ပါတီအတွင်း သဘောထား ကွဲလွဲမှု ဖြစ်ပေါ်
စစ်တွေမြို့ရှိ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ(ANP) ရခိုင်ပြည်နယ် ဗဟိုဌာနချုပ် (ဓာတ်ပုံ – နိရဉ္ဖရာ)
ရခိုင် အမျိုးသားပါတီ (ANP) ၏ ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များကြား သဘောထား ကွဲလွဲမှု ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။
ANP ပါတီသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ALD) နှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP) တို့အား ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပေါင်းစည်း ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ တွင်လည်း ရခိုင် ပြည်နယ်၌ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရထားသည့် ပါတီ ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ANP ၏ ပါတီ ဗဟိုအဖွဲ့ဝင် ALD နှင့် RNDP အုပ်စုတို့ကြား သဘောထား ကွဲလွဲနေမှုသည် ပါတီပြိုကွဲရေးသို့ ဦးတည်နေကြောင်း ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိနေသည်။
ပါတီတွင်း မပြေလည်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ALD ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများက ရန်ကုန်မြို့၌ အစည်းအဝေး တရပ်ပြုလုပ်ပြီး ရှေ့ဆက် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ကြမည်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ALD ၏ အတွင်းရေးမှူး ဟောင်းဖြစ်သူ ဦးမျိုးကျော် က ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
ဦးမျိုးကျော် က “ပါတီအသစ် တည်ထောင်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတော့ မချရသေးပါဘူး၊ ဗဟိုအဖွဲ့ဝင် အများစုက တော့ ပါတီသစ် ထောင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မြို့နယ်အသီးသီးက အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှ ဆုံး ဖြတ်ရမှာပါ”ဟု ပြောဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီးမှ ပါတီဝင်များနှင့် လာမည့် အောက်တိုဘာလတွင် တွေ့ဆုံပွဲများပြုလုပ်၍ ၎င်း တို့၏ ဆန္ဒသဘောထားများကို ကောက်ခံသွားမည်ဟုလည်း ဦးမျိုးကျော် က ပြောသည်။
ဦးမျိုးကျော် အပါအ၀င် ALD ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း တချို့သည် ပါတီ၏ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု မရှိဟု ဆိုကာ ANP ပါတီမှ ထုတ်ပယ် ခံထားရသူများ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ANP ပါတီ၏ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခိုင်ပြည်စိုး ကမူ အကယ်၍ ALD အဖွဲဝင်ဟောင်းများအနေဖြင့် ANP ပါတီမှ ခွဲထွက်၍ ပါတီသစ် တခု တည်ထောင်မည်ဆိုပါကလည်း တရားဝင် စာတင်ပြီး နုတ်ထွက်မည်ဆိုပါက ကန့်ကွက်စရာမရှိကြောင်း၊ ရခိုင် ပြည်နယ် ၏ လက်ရှိ အခြေအနေအရ ပါတီ သစ် ထောင်ခြင်း မထောင်ခြင်းသည် အဓိက မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသားရေးကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်မှုကသာ အဓိက ကျမည် ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ “ရခိုင်ပြည်ရဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေဟာ ပါတီတခုမှာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း နေရာရခြင်း မရခြင်း ထက် အမျိုးသားရေးအပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ စည်းစည်းလုံးလုံး လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒါကြောင့် ပါတီသစ် ထောင်တာကို အပြစ် မပြောလိုပေမယ့် စဉ်းစားကြပါဦးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်၊ အချင်းချင်း သည်းခံပြီး လုပ်စေချင်တယ်”ဟု လည်း ပြောဆိုသည်။
ANP ပါတီအတွင်း သဘောထားကွဲလွဲမှုသည် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် သံတွဲမြို့ ငပလီကမ်းခြေ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပါတီ ညီလာခံပြီးသည့် အချိန်ကပင် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ညီလာခံမှ ရွေးချယ်လိုက်သည့် ပါတီ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် အဖွဲ့၌ RNDP ကသာ နေရာ အများစုကို ရယူလိုက်ခြင်း အပေါ် ALD အဖွဲ့များက ကျေနပ်မှု မရှိခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ALD အဖွဲ့ဝင်များအား ANP ဗဟိုမှ ဖယ်ထုတ်ရေးကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုလည်း ALD အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများက ပြောဆိုမှု များလည်း ရှိနေသည်။
ထိုသို့ ပြောဆိုမှုသည် စွပ်စွဲမှုတခုသာ ဖြစ်ကြောင်း ဦးခိုင်ပြည်စိုး က ပြောသည်။
ANP ပါတီ အတွင်း သဘောထား ကွဲလွဲမှုသည် အောက်ခြေ ပါတီဝင်များ၊ ပြည်သူများကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ပါတီ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်း ဆောင် တချို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရှေးတန်းတင်မှု၊ အာဏာ လွန်ဆွဲမှုတို့ကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်နိုင်ငံရေး အသိုင်း အ၀ိုင်းက ပြောဆိုသည်။
ALD နှင့် RNDP ပါတီ ၂ ခု ပေါင်းစည်း ခဲ့ခြင်းသည်လည်း ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ ရခိုင် ပြည်သူများ၊ ဆရာတော်၊ သံဃာတော် များ၏ တိုက်တွန်းချက်အရ ပေါင်းစည်း ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်သူများ၏ တောင်းဆိုချက်အရ တည်ထောင်ခဲ့သည့် ရခိုင် အမျိုးသားပါတီ (Arakan National Party-ANP) အား ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၆ ရက် ရက်စွဲဖြင့် တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်။
ထိုအချိန်မှ စ၍ ALD နှင့် RNDP ပါတီ နှစ်ခုမှာလည်း ဥပဒေအရ ပါတီ အသီးသီး အဖြစ်မှ ဖျက်သိမ်းပြီး ဖြစ်သည်။
ANP ပါတီသည် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ် နေရာပေါင်း ၄၇ နေရာ အနက် ၂၃ နေ ရာ အနိုင်ရထားပြီး အမျိုးသား လွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တို့၌ ၂၂ နေရာ ရွေးချယ်ခံထားရကာ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ အင်အား အကြီးဆုံး ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီ ဖြစ်သည်။
The post ANP ပါတီအတွင်း သဘောထား ကွဲလွဲမှု ဖြစ်ပေါ် appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/2c75zLR http://ift.tt/1OYtTeJ
Posted on August 23, 2016 by freeburma
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အပြောင်းအလဲ
သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် အပါအဝင် ကြံခိုင်ရးပါတီရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် အတော်များများ ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကနေ အနားယူလိုက်ကြပါတယ်။
via သတင်း | Burmese – VOA http://ift.tt/2btcnSq http://ift.tt/Tf1V41
Posted on August 11, 2016 by freeburma
၂၁ ပင်လုံညီလာခံမှာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ စာတမ်းတင်မည်
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံမှာ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပါတီရဲ့ ရပ်တည်ချက် အနေနဲ့ စာတမ်းတစ်စောင် တင်သွင်းသွားမယ်လို့ ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးခင်ရီက ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ နေပြည်တော် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဌာနချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားအပြီးမှာ ဦးခင်ရီက သတင်းထောက်တွေ ကို ပြောတာပါ။
"အစုအဖွဲ့တစ်ခုချင်းကနေပြီးတော့ စာတမ်းတွေ တင်လိုက်မယ်၊ အဲ့ဒါတွေကို ပေါင်းစုပြီးတော့ စာတမ်း တစ်စောင်ပြုစုပါမယ်၊ အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ ရပ်တည်ချက်သဘောထားပေါ့၊ အဲ့ဒါကတော့ ဒီလေးခု စုံတော့မှ သုတေသနဌာနတွေ ဝိုင်းပြီးတော့ရေးပါမယ်၊ ၂၁ ပင်လုံညီလာခံကို ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ ရပ်တည်ချက်အနေနဲ့ တင်သွင်းကောင်း တင်သွင်းမှာပေါ့၊ နောက်တစ်ခု ကတော့ သြဂုတ်လ တတိယပတ်လောက်မှာလုပ်မယ့် ပါတီညီလာခံမှာ ဒီစာတမ်းတင်သွင်းမယ်၊ ဒါကို ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ချမှတ်ထားပါတယ်"
အဲ့ဒီစာတမ်းဖတ်ပွဲကို ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခေါင်းစဉ် ၄ ခု ပါတဲ့ စာတမ်း ၄ စောင်ကို တစ်စောင်တည်းအဖြစ် ပြုစာကာ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာ တင်သွင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုဆောင်ရွက်ချက်၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု ဦးတည်ရေနဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖော်ထုတ်ရေး၊ ပြည်ထောင်စု အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးနဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး စတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ပါတီညီလာခံကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ပထမကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီး လာမယ့်သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်ကနေ ၂၅ ရက် အထိ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့အခမ်းအနားကို ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိန်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးတင်နိုင်သိန်း တို့အပါအ၀င် ပါတီထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး နဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲကရရှိတဲ့ စာတမ်းတွေကို ၂၁ ရာ စုပင်လုံညီလာခံမှာ တင်ပြသွားမယ်လို့ ပါတီဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိန်က ပြောပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုဝင်းကိုကိုလတ်က တင်ပြထားပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2bkQvK0 http://www.rfa.org
Posted in Political Parties - နိုင်ငံရေးပါတီများ	| Tagged Civil Wars, Feedly, IFTTT, Political Parties, USDA	| Leaveacomment |
Posted on August 6, 2016 by freeburma
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2b3hOpT http://www.rfa.org
Posted in Political Parties - နိုင်ငံရေးပါတီများ	| Tagged 88 Open, Feedly, IFTTT, Political Parties	| Leaveacomment |